အဖြေရှာမရသော ပုစ္ဆာများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » အဖြေရှာမရသော ပုစ္ဆာများ
Posted by နွယ်ပင် on Jun 11, 2011 in Myanma News, News | 14 comments
အထက်ပါ စာကတော့ ဇွန်လ (၁၀) ရက်နေ့ နေ့စွဲပါ ပြည်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အောင်ဇော်ထက်က နာရေးကူညီမှုအသင်း သုခကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်း(ပြည်) ၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မူများကို ရပ်ဆိုင်းထားရန် ပေးပို့ထားသော စာဖြစ်ပါသည် ။
သုခကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်း(ပြည်)ကို ၈.၆.၂၀၁၁ မှစ၍ စမ်းသပ်ဖွင့်လှစ်ကာ ရဟန်းရှင်လူအပေါင်းတို့၏ ကျန်းမာရေး ကိစ္စအ၀၀ကို အခမဲ့ကုသပေးလျှက်ရှိရာ ၉.၆.၂၀၁၁ ရက်နေ့အထိ လူနာပေါင်း (၈၉) ဦးတို့ကို ကုသပေးပြီးဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာထွန်းနိုင်နှင့်အတူ ဆရာဝန် (၄)ဦးတို့မှ ကုသိုလ်ဖြစ် ပရဟိတစိတ်ဓါတ်ပြည့်ဝစွာ လာရောက်ကုသပေးမှုကြောင့် ပြည်မြို့ ရေနံချောင်း၊ ပုတီးကုန်း၊ သဲကုန်း၊ ပေါက်ခေါင်း၊ နှောကုန်း အစရှိသည့် မြို့ရွာများရှိ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သော ရဟန်း သံဃာ အများပြည်သူတို့မှာ များစွာဝမ်းသာပီတဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ထိုနည်းတူ ကုသပေးသော ဆရာဝန်ကြီး များ၏ပီတိ၊ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုလုပ်ခဲ့သော ပြည်မြို့ မိုးမေတ္တာပရဟိတလူငယ် သွေးလှူအဖွဲ့တို့၏ ပီတိ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ပီတိတို့ကား အတိုင်းအဆမရှိဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ယခုမူ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ တားမြစ်မှုသည် အဘယ်ကြောင့် တားမြစ်ရပါသနည်းဟု အဖြေရှာမရတော့ချေ။ အများပြည်သူတို့ လိုအပ်နေသော ကျန်းမာရေးကို လှစ်လျူရှုချင်ပါ၍လားဟု စဉ်းစားမိသည်။ ရဟန်းရှင်လူ အများပြည် သူတို့၏ မျက်နှာများ၊ အလှူရှင်တို့၏ မျက်နှာများကို တစ်ချက်လေးတော့ ငဲ့ကြည့်သင့်သည်။
ဘယ်လိုကြီးလဲ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ သူတွေရှိတော့ တားတယ် သူတို့ကရော ဘာတွေများလုပ်ပေးချင်လို့ပါလိမ့်။ အင်းကြာရင်တော့…..နှာခေါင်းသွေးတွေပဲ ထွက်မလား..။
နယ်မြို့ဖြစ်လို့ လူထုအားနဲ့ ဝိုင်းညှပ်လုပ်ကြည့်ပါလား။ အဲဒီစာထုတ်သူတင်မက သူအသိုင်းအဝန်း၊ အခြားငိုစားရယ်စားတွေကိုပါပေါ့…..
သူတို့က ဘာကြောင့် တားရတာလဲ ဘာအကြောင်းကြောင့် တားလဲဆိုတာ အခုထိစဉ်းစားလို့ မရတာအမှန်ပဲ အမှန်ဆို သူတို့မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အရာကိုလုပ်ပေးခဲ့တာပဲလေ အခုဆို ဒီဆေးခန်းလေးးကို ပြည်မြို့ တစ်မြို့ထဲတင်မဟုတ်ဘဲ ရေနံချောင်းတို့လို့ ပုတီးကုန်းတို့လို နေရာမျိုးကတောင် အားကိုးနေရတာ . လှူမယ့် အလှူရှင်တွေကလဲ အသင့်ပဲ အဲတာကို တားတယ်ဆိုတော့ တကယ်ကိုပဲ အဖြေရှာမရဘူး ….
တားချင်လို့ တားတာ ..
ကာရန် မညီတာဘဲ ရှိပါလိမ့်မည်..
မည်သို့သော အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းသည်ဖြစ်စေ..
သက်ဆိုင်ရာ.. အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင် အနေဖြင့်..
သက်ဆိုင်ရာ..အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းမှ.. ထိုအသင်းအဖွဲ့သည်..
နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားတို့အတွက်.. အန္တရာယ်မရှိ.. အကျိုးပြုနိုင်သည်ဟု.. ယုံကြည်မှ..သုံးသပ်ပြီးမှ..ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ သာလျှင်..
ထို အသင်းအဖွဲ့အား လှုပ်ရှားခွင့်..ပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်..
ထိုအတောအတွင်းတွင်လည်း.. အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူရသော အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့်..စုံစမ်းခွင့်..ရှိနေမည်.. စုံစမ်းနေရမည်..ထောက်လှမ်းနေရမည်ဖြစ်သည်..
ကျွန်တော်များ နိုင်ငံတွင်.. အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန တည်းဟူသော သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်သည်..
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ.. ပြုလုပ်နေသည်.. ပြုလုပ်နေနိုင်သည် မှန်သော်လည်း…
ကောင်း၏ ဆိုး၏… လျော်၏ မလျော်၏ ဟူသော အချက်များကို ဆုံဖြတ်ပေးရာတွင်.. အဆုံးအဖြတ်ပေးရာတွင်.. အားနည်းချက်များ..ရှိနေသေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်..
ကိုယ်တိုင်..အဲဒီ အသင်းရဲ့ ဦးဆောင်သူဖြစ်လာခဲ့ရင်.. ဖြစ်နေရင်..
အသင်းမှာ..စေတနာနဲ့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့.. လူငယ်တွေ..
စေတနာကို ရှေ့ထားတာမှန်ပေမယ့်.. အသင်းရဲ့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းနဲ့ အညီမဟုတ်ရင်..ခွင့်ပြုနိုင်ပါ့မလား..
စေတနာ..အမှားမျိုး ဖြစ်မှာစိုးလို့.. ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းပြီး ဆောင်ရွက်ကြရမှာပါ..
ဒါကြောင့်.. အာဏာပိုင်များနဲ့လည်း… ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှသာလျှင်..
မိမိတို့.. လမ်းကြောင်းကို ကောင်းစွာ ရှေ့ဆက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်…
တပ်မတော်၏ အခန်းကဏ္ဍကျယ်ပြန့်ခဲ့သော ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်..
လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးကို အဓိကထားကိုင်တွယ်ခဲ့လေ့ရှိသောကြောင့်..
အချို့သော နေရာ အတော်များများတွင်..
အဟန့်အတားသဖွယ်.. အခက်အခဲများ..ရှိနေဦးမည်မှာ မလွဲပါ…
စိတ်ကောင်းနှင့်ယှဉ် ရှေးရှုနှင်လော့.. ဟု… မိမိဖတ်မှတ်ဖူးသော လင်္ကာလေးကို ပြောပြရင်း..
စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်းနှင့်ယှဉ်သော..ပြည်မြို့ မိုးမေတ္တာပရဟိတလူငယ် သွေးလှူအဖွဲ့သည်..
မိမိတို့ရည်မှန်းထားရှိသော.. အများအကျိုး.. ရပ်ရွာအကျိုးများ.. ကို သယ်ပိုးရွက်ဆောင်နိုင်ပါစေ..
ကြည့်ရတာတော့ ဆရာကြီးလေသံပဲ။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးတို့၊ တပ်မတော်ကဏ္ဍတို့၊ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကြဖို့တို့၊ အဲဒီကောင်တွေကို -ီးပဲထင်တယ်ဟေ့…..
ဒါပေမယ့်.. ဒါက ကိုကြောင်ကြီးရဲ့ သဘောထားပါ..
အဲဒီ သဘောထားတွေက တစ်ကယ်တမ်း အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ အဆင်ပြေချင်မှ ပြေမှာပါ…
ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တာက.. လိုအပ်တာက တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပါ..
လတ်တလော ပြဿနာက လက်ရှိ အစိုးရနဲ့ သိပ်ပြီး အဆင်မပြေလှပါဘူး..
ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ.. ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ..
ကိုကြောင်ကြီးရဲ့ အမြင်ကိုလည်း ပြောပြပေးစေလိုပါတယ်..
ဒါမှသာ.. ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အားနည်းချက်.. အားသာချက်တွေကို သိနိုင်မှာပါ..
လက်ရှိအာဏာပိုင်တွေနဲ့ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မပြုဘူးဆိုရင်.. ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ လုပ်ကြမလဲ..
ကိုကြောင်ကြီး.. ဘယ်နိုင်ငံမှာနေတယ် ကျွန်တော်မသိပါဘူး.. ကျွန်တော်က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပဲ နေပါတယ်..
ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ဖြစ်စေ..ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဖြစ်စေ.. ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့. ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ.. အဲဒီလိုမှ မလုပ်ရင်.. သိပ်ပြီး အဆင်မပြေလှပါဘူး..
ကျွန်တော်တို့မှာ အခြားရွေးစရာ နည်းလမ်းကလည်း.. လတ်တလော ရှိမနေဘူး..
ဒါကြောင့် ဒီလို လုပ်ပါတယ်..
ဟုတ်ပြီ.. ကိုကြောင်ကြီး အနေနဲ့.. အာဏာပိုင်များနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူကို မြင်ပြင်းကတ်တယ် ဆိုပါတော့.. ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်လို ကူညီနိုင်မလဲ..
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ သဘောထားကွဲလွဲမှုကြောင့် အလုပ်မဖြစ်ခဲ့တာတွေ များလှပါပြီ..
ချေဂွေဗားရား ထုံးနှလုံးမူပြီးတော့သကာလ.. လက်နက်ကိုင်တိုက်မှာလား..
ဒါဆိုလည်း..လုပ်ကြဗျာ..လက်နက်တွေသယ်ခဲ့.. လက်နက်ကိုင်အစိုးရကို လက်နက်နဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ ခွန်အားနဲ့ အစွမ်းရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့…
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတောင်.. တစ်ချိန်က ရန်သူတော်ကြီး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်နဲ့ ပူးပေါင်းနေပါပြီ..
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ. ကျွန်တော်တို့ မိသားစုမှာ အမှန်တကယ် အခက်အခဲတွေရှိပါတယ်..
မှားတဲ့သူတွေကလည်း မှားနေပါတယ်.. ဘာလုပ်ကြမှာလဲ. ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ.
စိတ်ကူးထဲမှာ… စာအုပ်တွေထဲမှာ. မီဒီယာတွေမှာ. အွန်လိုင်းပေါ်မှာ..
တောထဲမှာ. အမှန်တစ်ကယ်..လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်..
တစ်ချို့နေရာတွေမှာဆို.. တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်.. အချင်းချင်းပစ်နေရတာပါ..
အယူအဆတွေနဲ့ပဲ.. ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ သုံးသပ်ချက်တွေ မပေးကြပါနဲ့..
တစ်ကယ် လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ကြပါ.. အဲဒီမှာမှ တစ်ကယ်အခက်အခဲတွေ တွေ့ရမှာပါ..
အားလုံးက တိုင်းပြည်ကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ပြောကြဆိုကြတယ်ဆိုတာနားလည်ပါတယ်..
ဒါပေမယ့်…မိမိခံစားချက်ပေါ်မှာ တည်ထားတဲ့ သဘောထားတွေထက်.. ဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်.. ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အလုပ်ဖြစ်မယ့် Solution ကိုသာ လိုချင်ပါတယ်….
အေးဗျာ ကိုဖြိုးရှိန်ပြောတဲ့ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ကိုယ့်ရဲ့ တဦးချင်းအခွင့်အရေး၊ အများပြည်သူ အခွင့်အရေး၊ တရားမျှတမှု ဆိုတာတွေကို စတေးကြပေါ့။ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင် မိမိဆွေမျိုးသားချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေကို စော်ကားသွားကြလည်း သည်းညီးခံကြပါ။ တော်လှန်အာခံတဲ့ စိတ်မမွေးကြပါနဲ့။
ငတ်နေသူကို ထမင်းထုပ် ပစ်ပေးလိုက်၊ နေမကောင်းသူကို တရုတ်ပြည်လုပ်ဆေး သွားတိုက်လိုက်၊ ငွေလိုသူတွေအတွက် နှစ်လုံးသုံးလုံးလုပ်သူတွေ၊ အလုပ်အကိုင်အတွက် အနှိပ်ခန်းတို့ ဖာခန်းတွေရှိတာကို မျက်စိမှိတ်ထားလိုက်။ ဒီလိုနည်းတွေနဲ့ ဖြေရှင်းပေးမယ့်လူများအတွက်တော့ ဟိုတယ်တွေ၊ လေကြောင်းလိုင်းတွေ၊ ဓါတ်ဆီဆိုင်တွေ၊ သစ်တော၊ ကျောက်မျက်သယံဇာတတွေ လုပ်ခွင့်ပေး ရမှာပေါ့။ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ လေသနတ်ပစ် ဆန့်ကျင်လှုံ့ဆော်နေမဲ့အစား အာဏာပိုင်တွေ စိတ်မငြိုညင်အောင် ခိုင်းတာလုပ်၊ ကျွေးသမျှစားပြီး ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ကြပါ။ အပြောင်းအလဲ ဆိုတာကို စိတ်တောင်မကူးသင့်ပါဘူး….
အခုလို အဖြစ်အပျက်မျိုး တခြားမြို့နယ်တွေမှာလဲ ကြုံဖူးပါတယ် …. အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာ ဥပဒေကို သေချာနားမလည်ပဲ လုပ်မိလို့ဖြစ်ရတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် … လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကို တင်ပြပေးလိုက်ရင် ပြီးသွားမှာပါ …
မဆလ စကားနဲ့ ပြောရင်တော့ ပုဆိန်ရိုး လိုကောင်တွေပေါ့ဗျာ
အထက်က ညွှန်ကြားချက် ဆိုပြီး ခွတုတ်နေတဲ့ ကောင်တွေလဲရှိတယ်ဗျ။
ညွှန်ကြားထားတာ နဲနဲ ပိုက်ဆံ မရလို့ ပြဿနာ ရှာတာတွေများတယ်။
ဒီလိုကောင်တွေက မင်းသိင်္ခ ပြောတဲ့ ၀ါးရင်းတုတ် လူစားမျိုး ကွ။
ကြုံရင်ပိုက်ဆံမပေးဘဲ ၀ါးရင်းတုတ်စာ ကြွေးသင့်တယ်။